May 18, 2019 - CeleLove
May 18, 2019 Cele Love 0
“သင့်မွေးရက်က ပြောတဲ့ သင့်အ​ကြောင်း” (အရမ်းမှန်လွန်းပါတယ်) (၁) ခွေး အကယ်၍ သင့်မွေးရက်သည် ခွေး ဖြစ်ပါက အလွန်သစ္စာရှိပြီး သဘောကောင်းသူ ဖြစ်သည်။ သင်၏ သစ္စာရှိမှုကို လုံးဝ သံသယ ဖြစ်စရာမလိုပေ။ အလုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ကာ အလုပ်ကို လေးစားသူ ဖြစ်ပြီး […]
ကနဦးသတင်း..ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း လူ (၉) ဦး သေဆုံးတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုကြီး
ကနဦးသတင်း..ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း လူ (၉) ဦး သေဆုံးတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုကြီး ရွှေပြည်သာ / ကနဦး သတင်း…. 18.5.2019 ဒီနေ့ညနေ့က ရွှေပြည်သာ တံတားအဆင်းမှာ အုတ်/သဲ ကားနဲ့ဖယ်ရီ (or ) ဘုရားဖူး ကားတိုက်ထားပါတယ် လူ၉ဦးသေဆုံးတယ်လို့ ကနဦးသတင်းအနေနဲ့ ရရှိပါတယ် […]
ပျိုမေတို့ မိတ်ကပ်လိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ပျိုမေတို့ မိတ်ကပ်လိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ မိတ်ကပ်လိမ်းတိုင်းလည်း မလှပါဘူးနော်။ လိမ်းခြယ်နည်းလေးတွေ လွဲနေရင် အဆင်မပြေပဲ လိုချင်တဲ့ ပုံစံကိုမရနိုင်တာကြောင့် ကြည့်လို့မလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခုဖော်ပြပေးမယ့် အချက်လေးတွေကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ (၁) Foundation ” Foundation ကိုပါးပါးလေးလိုချင်ရင် […]
ပုဂံ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားက ဦးရွှေရိုးအကဖြင့် ဖျော်ဖြေ …(ရုပ်သံ) …
ပုဂံ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားက ဦးရွှေရိုးအကဖြင့် ဖျော်ဖြေ …(ရုပ်သံ) … ပုဂံ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားက ဦးရွှေရိုးအကဖြင့် ဖျော်ဖြေ ခဲ့ ပါ တယ် …။ ယနေ့ နံနက်က ပုဂံအာနန္ဒာဘုရား ဗောဓိ‌ညောင်‌ပင်‌တွင် သွန်းလောင်းသည့် ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်အတွက် လှည့်လည်ရာတွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသား Mr.Olivier Cottone […]
သင့်ကို အသက်နဲ့အမျှချစ်တဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာ ဒီလိုလက္ခဏာ ( ၅ ) မျိုး ရှိကိုရှိပါတယ် …
သင့်ကို အသက်နဲ့အမျှချစ်တဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာ ဒီလိုလက္ခဏာ ( ၅ ) မျိုး ရှိကိုရှိပါတယ် … အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသားချင်းဆက်နွယ်နေမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပါ၊ အချစ်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါနော်..။ သင်ရော ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးလား ။ ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးဆို အရင်ကထက် ပိုလိမ္မာပါတော့နော်။ ။ (၁) […]
မြင်တွေ့လိုက်ရတာ စိတ်ကို မကောင်းဘူး ဘလိုင်းကြီး အနိုင်ကျင့်သွားတာ ရိုးရိုးသားသား အကြော်ရောင်းနေတဲ့ အကြော်သည်ကို မဝယ်ပဲခေါ်ပြီး ရန်စအနိုင်ကျင့် ခုနက မြင်​​တွေ့ရတာ စိတ်​ကို မ​ကောင်းဘူး ….😭😭 သူ့ကိုယ်​သူ ရိုးရိုးသားသား လုပ်​​ကိုင်​စား​သောက်​​နေတာကို ​၀ယ်​မယ်​ဆိုပြီး ​ခေါ်တယ်​တဲ့ ပြီး​တော့ မ၀ယ်​​တော့ဘူးဆိုပြီး ရန်​ရှာ​တော့ ​ရောင်းတဲ့လူက မ​ပေး​တော့နဲ့​ပြောတာကို […]
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးကြပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ရခြင်းကို နှစ်သက်တက်ကြပါတယ် …။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်လာအောင် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းများ […]
တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ… တစ်ကြိမ်တည်းလုပ်ရုံနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့ သခွားသီးနည်း လှတဲ့သူတိုင်း ဆားဝက်ခြံရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆားဝက်ခြံရှိနေတာတော့ ဘယ်သူမှ ကြိုက်ကြမယ် မထင်ပါဘူး …။ ဆားဝက်ခြံတွေဟာ နှာခေါင်း ၊မေးစေ့နှင့် ပါးပြင်တွေမှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိပြီး ညှစ်ရင်လည်း ပွါးတတ်တာကြောင့် အတော်စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ် …။ […]
ပုဂံ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားကဦးရွှေရိုးအကဖြင့်ဖျော်ဖြေ ယနေ့ နံနက်က ပုဂံအာနန္ဒာဘုရား ဗောဓိ‌ညောင်‌ပင်‌တွင် သွန်းလောင်းသည့် ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်အတွက် လှည့်လည်ရာတွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသား Mr.Olivier Cottone က ဦးရွှေရိုးအကဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဦးရွှေရိုးအကမှာအများကကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ပျော်စရာကောင်းသည့်အတွက် မိမိအနေဖြင့်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း Olivier Cottone ကဆို ပါတ ယ် …။ PYI […]
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တောထဲမှ ထူးဆန်းတဲ့ မြည်​တမ်းသံကြီး
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တောထဲမှ ထူးဆန်းတဲ့ မြည်​တမ်းသံကြီး ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ မရောက်ခင်အတက်လမ်းကွန်ကရစ်အကွဲကြားမှာ ခေါင်းလေးထောင်ပီး မော်ဖူးနေတဲ့ အကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လားဘာကြောင့် မိုးတွင်းဖက်တောင်ပိတ်တယ်ဆိုတာသိပြီးမဟုတ်လား ..? ကျိုက်​ထီးရိုး ဘုရားပွဲရာသီက သီတင်းကျွတ်​လပြည့်​​နေ့မှ ကဆုန်​လပြည့်​​နေ့အထိ၇ လတိတိ​တောင်​ ကျင်းပ​ခဲ့ ပါတ ယ် …။ ဖွင့်​ပွဲ​နေ့နဲ့ပိတ်​ပွဲ​နေ့ကို အခန်းအနား နဲ့ […]